HomePod yaizove nemayuniti mashoma pakuvhura, ichiwedzera kugadzirwa mu2018 | Ndinobva mac
Chigadzirwa chitsva cheApple, iyo HomePod, iri kuve imwe yenyeredzi zhizha. Kubva mukati memutauri weApple watichasangana mukupera kwegore rino, tiri kudzidza nhau dzezvinouya zvigadzirwa zveApple. Hatizive kana iri yechinangwa kana kwete, asi isu hatina kuona yakawanda hype uye hype nezve zvitsva Apple zvigadzirwa.
Maawa mashoma apfuura takasangana kubva paruoko rwemutungamiri wenyika Inventec Zvishandiso, David Ho, pamusangano wevatori venhau iyo imwe yemidziyo "Hupfumi hwetekinoroji" yaizotanga kugadzirwa kwayo nezvikamu zvishoma, kuwedzera kugadzirwa mukati me2018.
Izvo hazvitaure zvakananga nezve iyo HomePod, asi zvese zvinoratidza kuti chigadzirwa chiri mubvunzo ndicho Apple mutauri. Kuvimbika kweInventec Appliances, mugadziri weApple zvigadzirwa, zvinoratidzwa. Pamberi pekuratidzwa kwechigadzirwa paWWDC, akapa zvakadzama nezvechigadzirwa cheApple, ichirova pane maficha uye ruzivo rwechinhu chitsva
Isu pakupedzisira tichazotumira smart device kune vatengi gore rino, asi mupiro wako unenge uri mushoma uye tinotarisira kuti uchavandudza gore rinouya.
Zvichakadaro, vaongorori vanokoshesa zvinoitika zvePambaPod pane chirevo chemari chevashambadzi vakuru. Arthur Liao, muongorori kuTaipei Fubon Securities, anopa ruzivo runotevera:
Inventec Appliances inogona kungotakura chete mazana mashanu ezviuru zvePambaPod mayuniti gore rino, uye mupiro wechigadzirwa kuchikwata chemari ichave iri pasi pe500.000%.
Parizvino Icho chigadzirwa chekutanga, uye vese Apple nevaparidzi vanofanirwa kuona kuti vatengi vanogamuchirwa sei, kunyangwe aita izvo zvinoitika pamusika zvidzidzo. Iri izano rinoshandiswa neApple kana ichiunza chigadzirwa chitsva kumusika. Rangarira kuti kutengeswa kweAirPods kwakanonoka kusvika kupera kwegore, uye kusvika pamazuva mashoma apfuura, nguva yekuendesa yaive mavhiki matanhatu.
Nezve kugadzirwa kwechigadzirwa, maererano nesosi Nikkei, Apple inoronga kuwedzera Foxconn kuKePodP yekupa cheni gore rinouya.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » dzakawanda » HomePod yaizove nemayuniti mashoma pakuvhura, ichiwedzera kugadzirwa mu2018
Aetna inofunga kupa Watch kune yega yevatengi vayo